कसरी टिप्पणी प्रभाव प्रभाव ईन्जिन रैंक | Martech Zone
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० शुक्रवार, अक्टुबर 17, 2014 एडम सानो
के अन्य ब्लगहरूमा टिप्पणी गर्दा मेरो खोजी ईन्जिनको स्तरलाई मद्दत गर्दछ? गुगलको रैंकिंग एल्गोरिथ्म तपाईंको साइटमा फिर्ता प्रासंगिक लिंकमा धेरै तौल गर्दछ। लि links्कहरू तपाईंको साइट मद्दतमा फिर्ता भएदेखि, के यो टिप्पणी गर्दैन र तपाइँको लिंकहरूलाई जहिले पनि छोड्दा तपाइँको साइटलाई फाइदा हुन्छ? ठ्याक्कै होइन।
यस भर्खरको भिडियोमा, मत्ती Cutts (गुगलका लागि खोज क्वालिटी) ले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको ब्लगमा लिंक स्प्यामको साथ टिप्पणी पोष्ट गर्न अनुमति दिने सम्भावित जोखिमहरूको बारेमा छलफल गर्दछ। तपाईंसँग आफ्नो वेबसाइटमा सामग्री नियन्त्रण छ, र यदि गुगलले तपाईंलाई स्प्याम्मी वेबसाईटहरूमा लिंक गरीरहेको छ भने, उनीहरूले तपाईंको वेबसाइट स्प्यामीलाई पनि विचार गर्नेछन्।
उनले पनि Google सामान्यतया कारण मा छुन स्प्याम्मी इन-बाउन्ड लिंकहरूको लागि तपाइँको वेबसाइटलाई दण्ड दिदैन। यदि गुगलले कुनै पनि प्रकारको इन-बाउन्ड लिंक (हरू) को लागि वेबसाइटलाई दण्ड दिएको छ भने, तब प्रतिस्पर्धीहरूले खोज परिणामहरूबाट प्रतिस्पर्धा हटाउने प्रयास गर्दै एक अर्कालाई सबैभन्दा खराब लिंकहरू निर्माण गरिरहेका हुन्छन्।
त्यहाँ अझै धेरै ब्लगहरू छन् जुन थप गर्दैन rel = "nofollow" टिप्पणी लिंकमा विशेषता। किन ब्लग मालिक यो गर्न चाहान्छ?
A dofollow ब्लग टिप्पणी लि users्क प्रयोगकर्तालाई एक साधारण इनाम हो जसले मूल्यवान टिप्पणीहरू र प्रतिक्रिया थप्दछ। ब्लग मालिक मूल्यवान प्रयोगकर्ता-उत्पादित टिप्पणी हुन्छ र एक राम्रो टिप्पणी छोड्ने आगन्तुक dofollow लिंक हुन्छ। अधिकांश ब्लगहरू जसले dofollow कमेन्ट लिंकलाई कडाइका साथ ती टिप्पणीहरू र लि mode्कहरूलाई मद्दत गर्दछ, त्यसैले तपाईं लि post्क पोस्ट गर्नबाट पछि हट्नुहुनेछैन जबसम्म तपाईंको टिप्पणी ब्लग पोस्टमा योगदान गर्दैन र मूल्य थप गर्दछ।
अर्को कारण यो छ कि ब्लगले dofollow कमेन्टहरु लाई अनुमति दिन सक्छ यदि यदि ब्लग लामो समय को लागी गरीएको छ र मालिकले अक्सर प्लेटफर्म अपडेट गर्दैन। विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, हजारौं ब्लगहरू छन् जुन अपडेट गरिएको छैन किनकि rel = 'nofollow' विशेषता आविष्कार भएको थियो। धेरै ब्लगहरू अझै प्रयोग गरीन्छ र नयाँ पोष्टहरू नियमित रूपमा थपिन्छन्। यि धेरै ब्लगहरु करीबी मोडरेट गरिएको छ वा ब्लग टिप्पणी स्प्यामले भरिएको छ।
यदि तपाईं आफ्नो ब्याकलिink्क प्रोफाइल निर्माण गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य स्पामी टिप्पणीहरूको साथ ब्लग पोष्टबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईले स्प्याम्मी लि to्कहरूको छेउमा लिंक पोष्टिंगबाट सजाय पाउने सम्भावना हुनुहुन्न, तर गुगलले प्राय: यी स्पाम पहेलिएका पृष्ठहरू पहिचान गर्दछ र तिनीहरूलाई लिंक लिंकबाट फिल्टर गर्दछ।
प्रायः केसहरूमा ब्लग कमेन्ट लिंक पोष्ट गरेर तपाइँको ब्याकलिंक प्रोफाइल निर्माण गर्ने प्रयास प्रयासको लागि योग्य छैन किनकि यी साइटहरूमा सामान्यतया यति धेरै टिप्पणी लि contain्कहरू हुन्छन् कि पेजरैंंक मान पर्याप्त मात्रामा पार गर्न धेरै छुट्याइएको छ। ब्लग rel = 'nofollow' एट्रिब्युटको साथ टिप्पणी लिंकहरू तपाईंको वेबसाइटमा कुनै पनि मान दिदैन.
टैग: backlinksटिप्पणीखोज इञ्जिन श्रेणीएसईओ
तपाईंको विश्लेषणमा फेसबुक ट्राफिक गतिविधि ल्याउँदै
फेब्रुअरी १,, २०११ 27:१:2010 अपराह्न
यो उल्लेखनीय जानकारी हो। एउटा नोट मैले थप्न चाहान्छु, त्यो यो हो कि अर्को ब्लगरको ब्लगमा उत्कृष्ट टिप्पणीहरू प्रदान गर्दा तपाईंलाई प्राय ध्यान दिन सक्दछ। जब मैले पहिलो पटक ब्लग गर्न शुरू गरे, म प्राय: ब्लगहरूमा टिप्पणी गर्थें र तिनीहरूको लागि उत्कृष्ट सामग्री र छलफल प्रदान गर्थें। धेरैले ध्यान लिए र मेरो ब्लगमा लिंक गर्न थाले। मलाई थाहा छ कि १: १ ब्याकलिks्कमा व्यापार छैन, तर यो फलदायी हुन सक्छ!
साथै - मैले सोचें कि गुगलले नफोलो र डोफोलोसँग व्यवहार गर्ने तरिका समायोजित गरेको छ किनकि SEO केटाले पृष्ठ Sculpting को साथ गरिरहेका थिए… के त्यो स्थिति छैन?
राम्रो पोष्ट! धन्यवाद!
फेब्रुअरी १,, २०११ 28:१:2010 अपराह्न
@ डुग - गत समर एसएमएक्स उन्नत म्याट कट्सले सुझाव दियो कि हामीले पेजरन्कलाई "वाष्पीकरण" को रूपमा सोच्नु पर्छ जब नोफोलो विशेषता थपियो। यदि हामी उसलाई उहाँको शब्दका रूपमा लिन्छौं यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईंले तपाईंको साइटको पेजरेन्कलाई नफोलो एट्रिब्यूट प्रयोग गरी शिल्प वा मूर्तिकला गर्न सक्नुहुन्न।
सरलताको खातिर मानिलिनुहोस् कि तपाईंको ब्लग पोष्टमा १० पृष्ठको पँक्र्यांक मान छ। तपाईंसँग यो वेब साइटको लिंकहरू मार्फत अन्य वेब पृष्ठहरूमा पार गर्ने क्षमता छ। यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट र १ बाह्य वेबसाईट भित्र other अन्य पृष्ठहरूमा लिंक गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको माध्यमबाट बहन जारी राख्न सक्नुहुने पृष्ठराँक मानको १०% हराउनुहुन्छ। जब नफोलो एट्रिब्युट गुगलले अपनाएको थियो, प्रेमी एसईओएसले यस परिदृश्यमा बाह्य लि link्कमा यस विशेषतालाई उनीहरूको सबै पृष्ठराank्कमा राख्ने प्रयास गरे। यो सोच्दछ कि यसले तिनीहरूको वेबसाइट को अन्य आन्तरिक पृष्ठहरु मजबूत गर्दछ। यदि हामी पानफ्र्याकको बारे म्याट कट्सलाई विश्वास गर्दछौं जुन नफोलोको सम्बन्धमा वाष्पीकरण हुँदै छ, भने पृष्ठ पृष्ठ र्यान्कको युक्तिसंग यस विशेषताको कुनै मूल्य हुँदैन।
यो उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको ब्लग पोष्टहरूमा अन्य बहुमूल्य संसाधनहरूमा लिंक गर्न अझै मूल्य छ। भिडियो, छवि, लिंक र उपयोगी जानकारीको साथ तपाईंको ब्लग पोष्टहरूलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। तपाईले अझ धेरै पृष्ठर resource्क मान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको ब्लग पोष्टमा लिंक गर्न छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं अर्को बहुमूल्य स्रोत वा दुईसँग लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। "दिनुहोस् र प्राप्त गर्नुहुनेछ", "दिनेहरू प्राप्त गर्नुहोस्", कर्म, आदि। तपाईंले पोइन्ट पाउनुहुन्छ। यो काम गर्दछ।
म यो नोट गर्न चाहान्छु कि गुगलले nofollow विशेषता बेवास्ता गर्ने अधिकार राख्दछ। तिनीहरूले सम्भवत ब्लग टिप्पणी लिंकमा यो गुणलाई बेवास्ता गर्दैनन्। यद्यपि ट्विटर जस्ता लोकप्रिय सोशल मिडिया साइटहरूमा उनीहरूले यस विशेषतालाई बेवास्ता गर्न छनौट गर्न सक्दछन् जुन एक पटक उनीहरूले विश्वास गर्ने खाताहरू स्थापना गरे। अर्को उदाहरण यदि CNN.com ले प्रत्येक लिंकमा nofollow थप्न छनौट गर्छ। गुगलले सम्भावित धेरै जसो घटनाहरूलाई वेवास्ता गर्दछ किनभने तिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि CNN.com मा लिंकहरू वेबसाइटको मूल्यवान सम्पादकीय उल्लेखहरू हुन्।
मार्स 1, 2010 मा 2: 34 एएम
मैले यस शीर्षकमा केहि ब्लग पोष्टहरू पढेको छु र ती सबैले प्रायः स्पामको रूपमा टिप्पणी गर्ने ब्लगको बारेमा कुरा गर्ने देखिन्छन्। मेरो प्रश्न के हो यदि तपाईं dofollow ब्लगमा कडाई मोडरेट टिप्पणीहरू सहित टिप्पणी गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको साइटसँग वास्तविक टिप्पणीको साथ प्रासंगिक छ? कसरी खोजी ईन्जिनले यी लिंकहरू व्यवहार गर्दछ? के लिंकहरू कम टिप्पणीमा कम मूल्यवान छन् यदि ती ब्लग पोष्टको मुख्य भागमा हुन् भने?
मार्स 1, 2010 मा 10: 04 एएम
राम्रो पोस्ट, जेरेमी।
मान, वास्तविक वा कथित, ब्लग टिप्पणीबाट ब्याकलि of्कको परवाह बिना, यो उदाहरण हो जहाँ यो सबै सामग्रीमा तल आउँदछ।
ब्लगमा सान्दर्भिक, अन्तरदृष्टिको टिप्पणी पोष्टिंग अझै पनी प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको साइट र तपाईंको सेवाहरूमा ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ। आफैलाई राखेर, तपाईंको व्यक्तित्व, तपाईंको प्रतिष्ठा अरूको लागि बाहिर तपाईं आफैंलाई एक अधिकारीको रूपमा स्थापित गर्नुहुन्छ जुन व्यक्तिले खोज्नेछ।
मार्क्स 1, 2010 मा 11: 38 PM
ईमानदार सम्पादकीय लिंक ब्लग टिप्पणीमा पोष्ट गरियो जसमा rel = 'nofollow' एट्रिब्युट समावेश छैन Google मा मान्य लिंक हो।
मार्क्स 9, 2010 मा 1: 46 PM
निश्चित रूपमा तपाइँको कोठा बजारमा समान / परिचित ब्लगहरूको माध्यम बाट भवन लि link्क गर्दा तपाइँ तपाइँको साइट मा यातायात ड्राइव बनाउँछ। जहाँसम्म तपाईले चाखलाग्दो टिप्पणीहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, ती ब्लगको लेख पोष्टहरूमा मान थपेर, ब्लग मालिकहरू ती टिप्पणिहरू पाउन खुशी हुन्छन् र तपाईंलाई आफ्नो लिंक पनि छोड्न दिन्छन्।
मँ कुराकानीमा भाग लिन सिफारिस गर्दछु कि के बारे मा एक वेबसाइट पेज रैंक startups.com मा वृद्धि! तपाईं यसलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ http://bit.ly/cCgRrC प्रश्न र उत्तरहरूमा सीधा हुनको लागि लिंक लिनुहोस् अन्य विशेषज्ञहरू द्वारा पोष्ट गरिएको।
मार्स 31, 2012 मा 3: 07 एएम
जेरेमी, यदि एक WordPress CMS प्रयोग गर्दैछ, त्यहाँ छान्ने कुनै विशेष कमेन्टलाई do = अनुसरण स्थिति प्रदान गर्ने प्रावधान छैन। कसरी यो एक सम्झौता गर्छ?
थप, त्यहाँ यस बारेमा कुराकानी छ "तपाईंले आफ्नो पृष्ठ रैंकिंग अन्य वेबसाइटहरूसँग साझेदारी गर्नु हुँदैन"। के त्यहाँ यस तर्कमा कुनै वैधता छ?